दमयन्ती भर्सेज पिपल: दमयन्तीको भर्जिनिटी– भाग २
केही सीप नलागेपछि नविर्से पनि विर्सेजस्तो गर्न थालेँ । विर्सेजस्तो हुँदाहुँदै उसको फोटो देख्ने मौका पाएँ । मेरै साथीको मोबाइलमा । साथी भन्दै थियो, ‘एउटा ‘दाम्मी माल’को फोटो हेर्छस् ?’ हेरेँ । खासमा मेरो साथीले भनेको ‘दाम्मी माल’ त दमयन्ती पो रहिछ ।
स्तब्ध भएँ । बिचलित पनि । जुन मैले पत्याउन सक्ने कुरै थिएन ।
ऊ भने मबाट कुनै न कुनै प्रतिक्रिया सुन्न आतुर थियो । म प्रतिक्रिया जनाउने सक्ने स्थितिमा थिइनँ । एकछिन एकोहोरो भएछु ।
दमयन्तीप्रतिको विश्वास र साथीप्रतिको अविश्वाससँगै शंका पनि उब्जियो । कतै दमयन्ती गलत बाटोमा त लागिन ? वा फेरि कसैले उसको सोझोपनमाथि खेलबाड गर्यो ?
‘छैन त दाम्मी ??’, उसले झक्झक्यायो ।
हुनतः मलाई त्यो साथीसँग थप कुनै कुरा गर्नु थिएन । तर, मैले धेरै पहिलेदेखि खोजिरहेको दमयन्तीसँग भेट गर्नकै लागि भए पनि चासो देखाउनैपर्ने थियो ।
‘छे । अनि कहाँ हो नि यसको घर ?’
‘घर त मलाई मतलबै भएन नि यार !’
‘अहिले कहाँ छे त ?’
‘त्यो पनि मलाई बाल मतलब !’
‘तैंले कहिले भेटेको ?’
‘एक वर्षअघि । हामी एउटै अफिसमा काम गथ्र्यौं । म भनेपछि हुरुक्क हुन्थी । अफिसका सबैले यसलाई ताक्थे । म अनि अरुले पनि मोज गरे यसलाई ।’
म चिट्चिटाइसकेको थिएँ ।
कुरा गर्दै जाँदा थाहा भयो–
मैले दमयन्तीलाई काठमाडौं आएपछि अर्को साथीलाई भनेर जागिर लगाइदिएकै अफिसमा काम गर्ने रहेछ, त्यो साथी । अफिसमा काम गर्ने पनि होइन, त्यो एउटा कन्सलटेन्सी थियो । त्यहाँ ‘मान्छेको दलाली’ गर्ने रहेछ । विदेश जाने मान्छे खोजिदिए बापतको कमिशन खाने ।
बास्तबमा त्यो मेरो ‘क्लोज साथी’ पनि होइन । एउटै जिल्लाको भएकाले कहिलेकाँही भेट हुन्थ्यो । एउटा औपचारिक सम्बन्ध मात्रै । जसले मेरो प्रिय दमयन्तीबारे मनलाग्दी भन्दै थियो ।
तै पनि मैले थप केही बुझ्न सकिने आशाका साथ सोधेँ, ‘अनि भेट नभएको कति भयो ?’
‘धेरै भयो । पछि यसले त्यो अफिसै छाडेर हिँडी । अर्को त्यस्तै अफिसमा हाकिम रिझाउँदै होली’
मलाई सहनै गाह्रो भयो । तै पनि संयमता अपनाईरहेँ । केहीबेरपछि छुट्टिएँ ।
त्यो जागिर छाडेर कहाँ गई ? मामाकोमा बस्न छाडेर कहाँ बस्न थाली ? अचेल कहाँ होली ? मलाई त्यो साथीको कुरा पत्यार त लागेन ! तर, त्यो सोझीलाई फेरि कसैले कुनै बहानामा फसायो कि ? भनेर डराएँ ।
त्यसपछि दमयन्तीलाई भेट्ने हुटहुटी झन् बढेर आयो । तिब्र खोजी गरेँ । भेटिनँ । फेरि निराश भएँ । फेरि खोज्न छाडिदिएको थिएँ । तर, आजै मात्रै ऊसँग मेरो भेट भयोः होटल अन्नपूर्णमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा ।
कार्यक्रम थियोः ‘महिला हिंसाविरुद्ध सरोकारवालाहरुको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री । अनि, अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेमध्येकी एक थिइन्ः पिपल सिवाकोटी अर्थात् दमयन्ती ।
दमयन्तीले जागिर र बसाईं मात्रै होइन, नाम पनि परिवर्तन गरेर पिपल बनाइछन् ।
सुरुमै त दमयन्तीलाई चिन्न नै मुस्किल भयो । चिनेपछि एकैछिन स्तब्ध भएँ । अनि, उद्देलित ।
उक्त विशेष अन्तरक्रियाको सुरुमै पिपलले झन् विशेष कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् ।
फर्मल गेट अप । थाइकट काटेर स्ट्रेट गरेको हेयर स्टाइल । चमकदार अनुहार । स्पष्ट बोली र तर्क । वा ! क्या दमदार शैली । शानदार कार्यपत्र !
नेपालमा महिलाको स्थिति, पुरुषवादी सोचले महिलाको विकासमा परेका असरहरु । धर्मका नाममा पेलिएका नारीहरुको यथार्थचित्र । समाजमा महिलालाई पछि पार्ने राजनीति । मन्त्रीलाई नै जवाफ दिन कठिन हुने तर्कहरु ।
उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा दजनौं पटक जोडदार तालीले हल गुन्जयमान भयो । म पुलकित भएँ । वास्तवमै दमयन्ती अर्थात् पिपलसँग मेरो चिनाजानी भएकोमा गर्व अनुभूत गरेँ ।
लामो घम्साघम्सी, तर्क, वितर्क र कुतर्ककाबीच अन्तरक्रिया सकियो । म भने पिपलसँग भेट्ने उपयुक्त मौकामा थिएँ ।
अन्तरक्रियापछिको लञ्चका लागि मान्छेहरु लाइनमा बसे । म भने पिपलले देखुन् भनेर उनको अगाडि पर्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ । तर, उनीसँग भेट्न र गफ गर्न अरु धेरै सहभागीहरु आतुर रहेछन् । उनी अन्तै व्यस्त भइन् । मलाई देख्दैदेखिनन् ।
धेरैबेरपछि उनी लञ्च लिएर दाइने कर्नरमा गइन् । म पनि त्यतै गएँ । अरु कोही नभएको मौका छापेर छेवैमा गएर भनेँ, ‘एक्सक्युज मी !’
‘एस प्लिज’ भन्दै उनले ठाडो मुन्टो लगाइन् ।
हाम्रो आँखा जुध्यो । एकैछिन दुबैजना अवाक् भयौं । अलिपछि मैले नै साधेँ, ‘मलाई चिन्नुहुन्छ ?’
एकैछिनको मौनतापछि भनिन्, ‘चिन्छु ।...लन्च लिनुभयो ?’
उनलाई निकै असजिलो भएको महसुस गरेर भने, ‘सरी तपाईंलाई डिस्ट्रब भयो जस्तो छ ।’
‘इट्स् ओके, नो प्रब्लब्म । आधा घण्टापछि रेड कार्पेटमा भेटेर कफी पिउँदै गफ गरौंला । ओके ?’
‘स्याेर...!’ भनेर साइड लागेँ ।
आधाघण्टापछि रेड कार्पेटमा भेट भयो । कफी अर्डर गरिसकेपछि मैले नै कुरोको पायो फुकाएँ, ‘तपाईंको परिवर्तन र प्रगति देखेर खुसी लाग्यो ।’
‘यसमा तपाईंको हात छ ।’
‘तपाईंसँग भेट नभएको भए म त्यो अफिसमा जागिर खान पाउँदैनथिएँ । त्यो अफिसमा जागिर नखाएको भए म अहिलेको अभियानमा लाग्दैनथेँ । यो अभियानमा नलागेको भए, म आज यो ठाउँमा हुन्नथेँ ।’
‘त्यो अफिस, यो अभियान ! मैले त बुझ्नै सकिनँ ।’
‘कुरा धेरै छ विमल सर !’
‘तपाईंले जागिर लगादिएको ठाउँ मैले सोचेभन्दा बेग्लै रहेछ । त्यहाँ त केटी स्टाफहरुले हाकिम र हाकिमका साथीहरु रिझाउने गर्नुपर्दो रहेछ । हाकिमको अर्डरमा जोसँग पनि रात विताउन जानुपर्ने । अनि, अफिसमा आउने सबैको मलार्इ हेर्ने नजर नै फरक हुँदोरहेछ । म त त्यहाँ एक हप्ता पनि टिक्न सकिनँ ।’
‘मैले त्यस्तो ठाउँमा लगेर फसायो भन्ने सोच्नु भयो ?’
‘होला होइन, होइन नै दमयन्ती !’
‘अब मलाई पिपल भन्नुस् ।’
‘पिपल जी, मेरो नियत त्यस्तो थिएन ।’
‘मलाई थाहा छ । तपाईंको नियत त्यस्तो थिएन । तर भयो त्यस्तै ।’
‘अनि किन मसँग टाढिनु भो ? किन गुमनाम हुनुभयो ?’
‘मेरो सोझोपनका कारण धेरै पुरुषको ज्यादति भोगेँ । सहनै नसक्ने भएपछि म एउटा महिला हिंसाविरुद्ध काम गर्ने सस्थाको सम्पर्कमा पुगेँ । र, संकल्प गरेँ कि, अब जोकोही नारीलाई पुरुषको ज्यादतिबाट बँचाउछु ।’
‘मलाई पनि त्यस्तै सोच्नुभो ?’
‘कहिलेकाहीं त लाग्छ, सब लोग्नेमान्छे उस्तै हुन् । तर जिन्दगीमा केही उल्लेख्य काम गरेर मात्रै तपाईंसँग भेट्न चाहन्थेँ । संयोगले आज भेट भयो ।’
‘ठिक छ, तपाईं सुखी र खुसी हुनुहुन्छ भने मलाई भेट्न जरुरी पनि छैन ।’
‘त्यस्तो पनि होइन ।’
‘एनी वे, कहाँ बस्नुहुन्छ अचेल ? बताउन मिल्छ ?’
‘सियोर, लाजिम्पाटमा एउटा फ्याट लिएको छु ।’
‘कोको बस्नुहुन्छ ?’
‘एक्लै । मेरो फ्याट चिनेर जानुहुन्छ ?’
कफी पिइसकेर हामी बाहिरियौं । बिल पिपलले नै तिरिन् । पिपलकै स्कुटरमा बसेर पिपलको फ्ल्याटमा गएँ । फ्ल्याटमा छिर्नेवित्तिकै देखिने गरी एउटा ठूलो तस्बिर झुण्डाएकी रहिछन् । त्यो तस्बिर अरु कसैको नभएर मेरै थियो ।
दमयन्तीको भर्जिनिटीको पहिलो भाग हेर्नुहोस्
दमयन्तीको भर्जिनिटी (भाग–१)